के हो ब्रोङ्काइटिस ? यस्ता छन् कारण, लक्षण बच्‍ने उपाय ! | Suvadin !
के हो ब्रोङ्काइटिस ? यस्ता छन् कारण, लक्षण बच्‍ने उपाय !
काठमाडौं । श्वासप्रश्वास नलीले फोक्सोसम्म हावा पु-याउने र हावालाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ । श्वासप्रश्वास नली सुन्निनुलाई चलनचल्तीको भाषामा छातीमा चिसो लाग्नु तथा चिकित्सकीय भाषामा ब्रोङ्काइटिस भनिन्छ । भाइरसको संक्रमणबाट यस्तो हुने गर्दछ ।
ब्रोङ्काइटिस एक हप्तादेखि तीन हप्तासम्म निको हुन्छ । आममानिसले ब्रोङ्काइटिस र दमलाई एकै रूपमा बुझ्छन् । तर, दम क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस हो । छातीमा चिसो लाग्दैमा सुरुवाती चरणमै दम हुँदैन । यदि ब्रोङ्काइटिसका लक्षण लगातार ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म देखिए मात्रै यसलाई दम भएको मानिन्छ । त्यसैले, ब्रोङ्काइटिस समय–समयमा दोहोरिएमा दम हुने सम्भावना बढ्छ ।
सामान्यतया ब्रोङ्काइटिस चिसो समयमा बढी हुने गर्दछ । त्यस्तै, मौसम बदलीको समयमा पनि धेरै मानिस यस्तो समस्याबाट प्रभावित हुन्छन् । सुरु–सुरुमा जिउ दुख्ने, रुघाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । बिस्तारै खोकी धेरै लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, छातीमा गाह्रो महसुस हुने गर्दछ ।
ब्रोङ्काइटिस इनफ्लुएन्जा भाइरसको संक्रमणबाट हुने गर्दछ । यसलाई एन्टिबायोटिक औषधिको माध्यमबाट निको पार्न सकिँदैन । धुवाँधुलो ब्रोङ्काइटिसको प्रमुख कारक हो । प्रदूषित वातावरण, धूम्रपानको कारणले श्वासनलीमा असर पु-यारहेको हुन्छ । जसकारण फ्लु भाइरसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छ ।
प्रतिरोधी क्षमता कम भएमा व्यक्तिहरू पनि ब्रोङ्काइटिसबाट बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । एलर्जी, चिसो लाग्दा, सामान्य रुघाखोकी लागेको वेलामा समेत ब्रोङ्काइटिसको समस्या बढी हुने गर्दछ । ब्रोङ्काइटिस सबै उमेर समूहमा हुने भए पनि प्रतिरोधी क्षमता कम हुने व्यक्ति अर्थात् बालबालिका र वृद्धवृद्धामा बढी हुन्छ ।
चिसो, धुवाँधुलोबाट टाढा रहन सकेमा ब्रोङ्काइटिस हुनबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै, धूम्रपान नगर्ने, धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको नजिक नबस्ने, भिडभाडबाट टाढा बस्ने, बाहिरबाट आएपछि राम्ररी हात धुनेजस्ता बानी बसाल्नुपर्छ ।
भिडभाडमा हिँड्दा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । रुघाखोकीको समयमै उपचार गर्नुपर्छ । फ्लु भएमा सकेसम्म छिटो भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । ज्वरोको औषधि सेवन गर्नुपर्छ । झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ । लामो समयसम्म ब्रोङ्काइटिस भएमा दम हुने सम्भावना बढेर जाने भएकाले समयमै उपचार गर्नुपर्छ ।